Shil gaari oo geystay khasaare dhimasho oo ka dhacay Magaalada Hargeysa. – PuntSom – kalasoco wararka
Shil gaari oo geystay khasaare dhimasho oo ka dhacay Magaalada Hargeysa.
in Wararka, Wararka Somalida June 10, 2018	28 Views
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in shil gaari oo ka dhacay Magaalada ay ku geeriyoodeen Saddex Caruur ah oo Walaalo.
Shilka, waxa uu ka dhacay Xaafada Masalaha ee dhacda Koofurta Hargeysa, waxaana Dhaawac daran oo soo gaaray Isbitaalka weyn loola Cararay Caruurtii uu jiiray Gaariga Candha Meydlaha ah ee lagu qaato Alaabaha Bagaashka ee Goobaha Ganacsiga la geeyo.
Goob Joogayaal ayaa soo sheegay in shilka oo dhacay Abaara Sagaalkii Subaxnimo ee Saaka, ay mar qura geeriyoodeen Saddexda Walaalaha ahaa oo lala tacaalayay Xaaladooda Caafimaad.
“ Walaale Caruurta dhimatay ee Saddexda ah wey wada taagnaayeen, Mar kaliya ayuu gaariga Jiidhay maadaama uu Bareega waayay, Sodon Daqiiqo gudohood ayey Caruurtu Naftii ka baxday, Maadaama dhaawocooda uu cuslaa” ayuu yiri Mid kamid ah dadka deegaanka.
Caruurta Geeriyootay ayaa da’doodu kala eheyd; 13 Jir, 15 Jir iyo 2o Jir, Waxaana markii danbe goobta deg deg ugaaray Ciidamada amniga, kuwaasoo gacanta ku soo dhigay Wadihii gaariga shilka geystay, kaa soo lagu hayo Xarumaha Baarista ee Ciidamada amniga.
Caruurta geeriyootay ayaa kala ahaa Gabar 20 Jir ah iyo laba Wiil, Kuwaasoo dhawaan uun ay geeriyootay Hooyada Dhashay.
Si Kastaba, Somaliland ayaa Ciidamo dheeraad ah ku soo daadisay Wadooyinka waaweyn iyo Suuqyada Magaalada Hargeysa, kuwaasoo sugaya amniga inta ka harsan Bisha Ramadaan iyo Maalmaha Ciida.
Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Sareeye Gaas C/llaahi Fadal Iimaan oo xalay Warbaahinta kula hadlay Suuqa Waaheyn, ayaa digniin udiray wadayaasha Gawaarida iyo kuwa Wadooyinka dhigta Gawaarida, isagoo sheegay in ku dhowaad 600 oo askari ay Magaalada Soo galeen.